Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Weerarkii Lagu Qaaday Xeryaha Gumaysiga ee Dhagaxmadow iyo Dhuxun
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Weerarkii Lagu Qaaday Xeryaha Gumaysiga ee Dhagaxmadow iyo Dhuxun
Posted by ONA Admin	/ August 4, 2014
Wararkii ugu dambeeyay een ka helnay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa ka warbixiyay dagaallo meela kala duwan oo dalka ah ka dhacay. Dagaalada aan warbixintooda helnay oo ahaa kuwii bisha barakaysan ee Ramadaanka ayaa cadawga lagu gaadhsiiya khasaare laxaadleh, oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dagaalada oo meela kala duwan oo Ogadenia ah ka socda ayay warbixinta aan helnay ka warbiixisay dagaal xoogan oo ka dhacay degmada Dhagaxmadow halkaasoo cadawga lagu qaaday dagaal habeenimo oo dhamaan ciidankii ku sugnaa halkaa cagta la mariyay.
Warar kale oon ka helnay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa noo xaqiijiyay in todobaad kahor meel kutirsan degmada Dhuxun ay CWXO weerar ku qaaden xero ay daganaayeen koox dhidid-dhowrka gumaysiga oo halkaa ku sugnaa dhibaatooyin badanna u gaysanayay dadka shacabka ah. Weerarkaa ayuu noo sheegay in lagu dilay ugu yaraan 15 katirsanaa Hawaarinta (Regiment-ka 9aad), waxaana halkaas ka mid ahaa kuwa ku dhintay sarkaalkii watay oo la odhan jirin shaanbal Maxamed Yexye.
Dagaalada aan ku helnay warbixintii Xarunta Dhexe ayaa u dhacay sidan.
17/7/14 Mundulka oo Dagmada Dhagaxmadow katirsan weerar habeenimo oo culus oo ay CWXO kuqaadeen ciidamada gumaysiga oo halkaas kusugnaa waxaa cagta lamariyay ciidankii wayaanaha oo firxadkoodii soo gaadhay dagmada Dhagaxmadow. Khasaasaha dhabta ah ee ciidanka gumaysiga soo gaadhay faahfaahin lagama helin.
19/7/14 Xudur oo dagmada Awaare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahin tiisa lahaynin.
29/7/14 Moqoray oo Dagmada Awaare ee Gobolka Jarar katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxaa soogalay ciidan uu cadawguleeyay waxaana lagaga dilay 2 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
29/7/14 Gonda oo Dagmada Baabili katirsan dagaal cwxo iyo kuwa gumaysiga kudhex maray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay inta lahubo 2 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
31/7/14 Gol-libaax oo dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare balaadhan oo aan wali lasoo faahfaahinin.
1/8/14 Qudhac-qalooc oo Dagmada Gumagado katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 6 askari tiro aan lahubina waa laga dhaawacay.
1/8/14 Karinkasuulle oo Dhagaxbuur katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxaa soogalay kolonyo baabuur ah oo ay wateen ciidamada cadawgu waxaana goobta lagu holciyay 1 baabuur oo nooca uuraalka ah.: